Forum အသစ်တွင် မည်သို့သော ကဏ္ဍများတွင် ပါဝင်ဆွေးနွေးမည်နည်း?
Myanmar IT Resource Forum » ADMINISTRATION BOARD » » Announcement » Forum အသစ်တွင် မည်သို့သော ကဏ္ဍများတွင် ပါဝင်ဆွေးနွေးမည်နည်း?
1 Forum အသစ်တွင် မည်သို့သော ကဏ္ဍများတွင် ပါဝင်ဆွေးနွေးမည်နည်း? on 12th April 2011, 2:59 pm
ကျွန်တော် စာမေးပွဲပြီးရင် ဖိုရမ်အတွက် အချိန်ဖယ်ပေးပြီးတော့ Category ပြန်ခွဲမယ်လို့ စိတ်ကူးထားပါတယ်...
ဒီတစ်ခါတော့ Category တွေကို ရှုပ်ပွမနေစေဘဲ အတတ်နိုင်ဆုံး အနည်းဆုံး ထားပါမယ်..
အများဆုံးအဖြစ် အခု ၂၀ ဘဲ ထားပါမယ်..
အဲဒီ့အတွက် ကိုယ်ဆွေးနွေးမယ့် Category ကို ထိပ်ဆုံးထားပြီး၊ ဖတ်ချင်တဲ့ Category ကို နောက်ကကပ်လို့ အစဉ်အတိုင်း ပြောပေးကြပါ...
ကျွန်တော့် Category တွေကတော့
-JS & JQuery
Operation System Related
အားလုံးရဲ့ input ကို လိုချင်ပါတယ်.. ကိုယ်တကယ် ဆွေးနွေးမယ့်၊ တကယ် စိတ်ဝင်စားတဲ့ ကဏ္ဍလေးတွေကိုဘဲ ပြောပါ... Category အများကြီးနဲ့ မစွံတာမျိုး မဖြစ်ချင်လို့ပါ...
2 Re: Forum အသစ်တွင် မည်သို့သော ကဏ္ဍများတွင် ပါဝင်ဆွေးနွေးမည်နည်း? on 12th April 2011, 6:48 pm
ကျွန်တော်ကတော့ အကုန်ဖတ်ချင် မှတ်ချင် လေ့လာချင်ပါတယ်
အဲ့တော့ ကျွန်တော့် အမြင်လေးပြော ရရင်
HELP ZONE နဲ့ GENERAL TECHNOLOGY လို နဲနဲရောရောထွေးထွေး ရှိနေတာလေးတွေကို
ပြန်စုလိုက်ရင် အဆင်ပြေသွားမယ်လို့ ထင်ပါတယ်
(မော်ဒယ်မလေးအရမ်းလှပါတယ် ဒါပေမယ့် သရုပ်ဆောင်မကောင်း စကားပြောမကောင်းလို့မင်းသမီးမဖြစ်ပါ )
ကျွန်တော်တို့ ရဲ့MITR အမြဲလှပအောင်မြင်နေဖို့Member တိုင်းမှာတာဝန်ရှိပါတယ်
Last edited by nGr69 on 12th April 2011, 7:15 pm; edited 1 time in total
3 Re: Forum အသစ်တွင် မည်သို့သော ကဏ္ဍများတွင် ပါဝင်ဆွေးနွေးမည်နည်း? on 12th April 2011, 6:55 pm
ပြီးတော့ အကုန်ဖတ်ချင် မှတ်ချင် လေ့လာချင်တယ်ဆိုတာက၊ လူတစ်ယောက်က ရှိသမျှ Category တွေကို အကုန် ဖတ်မှတ်ဖို့ရာတော့ မနိုင်ဘူးထင်တယ်နော်...
ပြီးတော့ category တွေ ချုံ့တယ်ဆိုတာလည်း တကယ်ရေးမယ့်သူတွေ၊ တကယ် ဆွေးနွေးမယ့်သူတွေရှိမယ့် Category ဘဲ ထားချင်လို့ပါ။ နောက်ပိုင်း ရေးမယ့်သူ တိုးလာတာနဲ့ အမျှ ထက်ပြီး တိုးပေးသွားမှာပါ
မော်ဒယ်မ ဥပမာနဲ့ ပတ်သက်ပြီးပြောရရင်တော့...
မော်ဒယ်မလေး သရုပ်ဆောင်ကောင်းချင်သည်... စကားပြောကောင်းချင်သည်... ထို့အတွက် သူ့ အမေက သူ့ကို အားသွန်ခွန်စိုက် သင်ပေးနေပါသည်... သို့သော် သူကိုယ်တိုင်က အားမစိုက်ပါ... ထို့ကြောင့် သူ့ကို လှအောင် မွေးထုတ်ပေးထားသော အမေလည်း စိတ်ဓါတ်ကျလာသည်...
မော်ဒယ်မလေး သရုပ်ဆောင်ကောင်းချင်ရင်၊ စကားပြောကောင်းချင်ရင် အမေနဲ့ အဖေကိုချည်း အားကိုးလို့မရပါ...
4 Re: Forum အသစ်တွင် မည်သို့သော ကဏ္ဍများတွင် ပါဝင်ဆွေးနွေးမည်နည်း? on 12th April 2011, 7:38 pm
အဆင်ပြေပါတယ်။ Programming လေးလဲထည့်ပေးပါ။ Microsoft Platform တွေက ဆွေးနွေးတဲ့လူများနိုင်ပါတယ်။ Freeware Zone လေးကော ထည့်လို့ မရဘူးလား။ Meeting အတွက်လဲ ရက်သတ်မှတ်ပေးပါဦးနော်။
5 Re: Forum အသစ်တွင် မည်သို့သော ကဏ္ဍများတွင် ပါဝင်ဆွေးနွေးမည်နည်း? on 12th April 2011, 7:40 pm
တစ်ခုလောက်ဖြည့်ပြောပါမယ်.... ဒီ Topic က ကျွန်တော့်အနေနဲ့ Member တွေဆီက suggestion ကောက်တာပါ..
ကျွန်တော်ပါချင်တဲ့ Category တွေချည်းထည့်လိုက်လို့ရပေမယ့်၊ အဲလိုမလုပ်ဘဲ Member တွေဆီက List ကောက်တာပါ...
ကျွန်တော့်လို List လေးနဲ့ တိတိကျကျ လုပ်ပေးပါ.
6 Re: Forum အသစ်တွင် မည်သို့သော ကဏ္ဍများတွင် ပါဝင်ဆွေးနွေးမည်နည်း? on 12th April 2011, 8:57 pm
စုစုပေါငျးရေးသားခကျြမြား : 41
မှတျပုံတငျသောနေ့ : 2010-09-24
Security ပိုင်းကိုစိတ်ဝင်စားပါတယ် Android Development ပါမယ်ဆိုလို.၀မ်းသာပါတယ်။ windows Server ပါ ပါရင်ပိုကောင်းပါမယ်
7 Re: Forum အသစ်တွင် မည်သို့သော ကဏ္ဍများတွင် ပါဝင်ဆွေးနွေးမည်နည်း? on 12th April 2011, 8:59 pm
a little js
how can jquery do
php... i don't know anything...
shell and python
hmm that's all i'm interested now
8 Re: Forum အသစ်တွင် မည်သို့သော ကဏ္ဍများတွင် ပါဝင်ဆွေးနွေးမည်နည်း? on 12th April 2011, 10:14 pm
fox တစ်ယောက်ကလွဲရင် ကျန်တဲ့သူတွေပြောတာ အရမ်းကို General ကျလွန်းပါတယ်...
ဥပမာ။ Programming ဆိုလည်း ကိုယ်ကတော့ ဘယ် Language ကို စိတ်ဝင်စားတယ်.. ဘယ် Language ကို လုပ်နေတယ်. အဲဒီ့အတွက် အဲဒီ့ Language နဲ့ ပတ်သက်တာ ပါစေချင်တယ်.. အဲဒီ့လို ဖြစ်စေချင်ပါတယ်...
နောက်ပြီး Networking လိုဟာမျိုး၊ Security လိုဟာမျိုးကို ကျွန်တော်လည်း အသေအချာမသိလို့... ဘယ်လိုခွဲရမယ်ဆိုတာ သေချာထည့်ပြောပါ...
nGr69 wrote: HELP ZONE နဲ့ GENERAL TECHNOLOGY လို နဲနဲရောရောထွေးထွေး ရှိနေတာလေးတွေကို ပြန်စုလိုက်ရင် အဆင်ပြေသွားမယ်လို့ ထင်ပါတယ်
Help Zone နဲ့ General Tech လို နဲနဲရောတယ်ဆိုတာမှာ ဘာတွေရောစေချင်တာပါလဲ..
networking မှာလည်း အပိုင်းတွေ အများကြီးရှိမယ်လို့ ထင်ပါတယ်... ဘယ်အပိုင်းတွေပါလဲ..
ထက်နိုင် wrote: အဆင်ပြေပါတယ်။ Programming လေးလဲထည့်ပေးပါ။ Microsoft Platform တွေက ဆွေးနွေးတဲ့လူများနိုင်ပါတယ်။ Freeware Zone လေးကော ထည့်လို့ မရဘူးလား။ Meeting အတွက်လဲ ရက်သတ်မှတ်ပေးပါဦးနော်။
အပေါ်မှာပြောသလိုပါဘဲ.. Programming လေးလဲထည့်ပေးပါလို့ပြောတာ အရမ်းကို general ကျလွန်းပါတယ်.. ကျွန်တော့်ထဲက PHP ဆိုတာလည်း programming(coding) ထဲထည့်လို့ရပါတယ်.. M$ Platform မှာလည်း တစ်ပြွတ်ကြီးရယ်.. Silver Light အထိရှိတယ်..
r0m30 wrote: Security ပိုင်းကိုစိတ်ဝင်စားပါတယ် Android Development ပါမယ်ဆိုလို.၀မ်းသာပါတယ်။ windows Server ပါ ပါရင်ပိုကောင်းပါမယ်
Security မှာ Web Security, Mobile Security, Desktop Security, House Security စသဖြင့် ရှိပါတယ်..
9 Re: Forum အသစ်တွင် မည်သို့သော ကဏ္ဍများတွင် ပါဝင်ဆွေးနွေးမည်နည်း? on 13th April 2011, 2:20 pm
-Seminar News & Local News
-Global News & Product Review
-Article & Poems
Web Developing Region
Operating System Region
10 Re: Forum အသစ်တွင် မည်သို့သော ကဏ္ဍများတွင် ပါဝင်ဆွေးနွေးမည်နည်း? on 17th April 2011, 10:17 pm
သင်္ကြန်ရက်မို့ထင်တယ် 1 post ဘဲ တက်တယ်ဟ..
တို့ ဖိုရမ်က အပြင်မှာတွေ့ဖို့ကို သင်္ကြန်မှာ ချိန်းလိုက်ရမှာ..
11 Re: Forum အသစ်တွင် မည်သို့သော ကဏ္ဍများတွင် ပါဝင်ဆွေးနွေးမည်နည်း? on 18th April 2011, 1:53 pm
ကဲ ကိုကို.. လာပြီ။ ပျောက်နေရာကနေပေါ်လာပြီရေးလို့စိတ်မဆိုးနဲ့နော်...
- - C#(If)
- - Silver Light
- - Java ( i don't know about Java Programming Languages Versions)
- - Microsoft SQL
- - Windows XPs
- - Windows Vista (If)
- - Windows Server Versions(2000,2003,2008,..., Share Point. We have to discuss about this coz u know.)
- - Ubuntu
- - Slax (If)
- - Some Version from Linux OSs
- - Some Version from Mac OSs
- Microsoft Platform
- Cisco (for wireless)
- Virus Alerts (If)
- - Microsoft Platform
- - Linux Platform
- - Mac Platform
- - White Hat(for Security purposes likes CEH)
If we can, we're going to writeaposts for Basic User and Employer.
- Microsoft Publisher( If )
Open Office (for Open Source) (If)
- Spread Sheet
- In Design (If)
(Something i can help... )
That's call off for now..
I try to spare my time for ICT now.That's why, i can focus about this Site.
12 Re: Forum အသစ်တွင် မည်သို့သော ကဏ္ဍများတွင် ပါဝင်ဆွေးနွေးမည်နည်း? on 18th April 2011, 7:20 pm
အပေါ်ဆုံးမှာ ကျွန်တော်ပြောထားတယ်နော်... အတတ်နိုင်ဆုံး ချုံ့ချင်တယ်ဆိုတာ... အများဆုံးအဖြစ် အခု ၂၀ ဘဲ ထားချင်တာနော့်...
အစ်ကို ကိုယ်တိုင် အမှန်အကန်ဝင်ရေးမယ့်၊ ဦးဆောင်ဆွေးနွေးမယ့် ကဏ္ဍတွေနဲ့၊ ဖတ်လည်းဖတ် ပြန်လည်ဆွေးနွေးမယ့် ကဏ္ဍတွေကို အနောက်မှာကပ်ပြီး ရေးပေးပါဂျ...
အခု အစ်ကိုရေးသွားတဲ့ section တွေက အားလုံးပါသင့်ပါတယ်... တကယ်တော့ အခုလက်ရှိ ဖိုရမ်ထဲမယ် ရှိပြီးသားကဏ္ဍအကုန်ကလည်း ပါသင့်နေပါတယ်. ဖြုတ်တောင်မဖြုတ်သင့်ပါဘူး.. ဒါပေမယ့် ပါသင့်တိုင်းထည့်ထားတော့ အရမ်းကြီးဖောင်းပွနေပြီး၊ ၀င်ရေးမယ့်သူမရှိတဲ့ section တွေအတော်များနေလို့ပါ... အစ်ကိုရေးသမျှ section တွေက ကောင်းလည်းကောင်း၊ ပါလည်းပါသင့်ပေမယ့်၊ နည်းနည်းတော့ များသေးသလားလို့။ (အစ်ကိုကိုယ်တိုင် အနည်းဆုံး အဲဒီ့ section တစ်ခုဆီမှာ တစ်ရက်ကို Article တစ်ခုဝင်ရေးမယ်ဆိုရင်တော့ ခုဘဲလုပ်ပေးမယ်.. ဟီးဟီး...)
13 Re: Forum အသစ်တွင် မည်သို့သော ကဏ္ဍများတွင် ပါဝင်ဆွေးနွေးမည်နည်း? on 23rd April 2011, 12:52 pm
sHa92 wrote: ကိုအသဲကွဲ.. များလှချည်လား...
ခရီးမထွက်ဖြစ်ရင် Online ကောင်းနေရင်
Network ပိုင်းမှာ လေ့လာမိသလောက်ပြန်ရေးပေးပါ့မယ်။
နောက် ဗိုင်းရပ်(စ်) Alert ရောပေါ့။
ဟုတ်ပါတယ် မင်မင်ကြီးပြောသလို ဖောင်းပွပြီးလူမစည်ရင်
တော့မကောင်းဘူးပေါ့။ Office လိုဟာမျိုး Basic ပိုင်းတွေကို
14 Re: Forum အသစ်တွင် မည်သို့သော ကဏ္ဍများတွင် ပါဝင်ဆွေးနွေးမည်နည်း? on 23rd April 2011, 1:00 pm
ကဲ ဒါကထပ်ချုံ့ကြည့်ထားတာပါ..။ များနေသေးလား
- - White Hat(for Security purposes likes CEH)(if)
15 Re: Forum အသစ်တွင် မည်သို့သော ကဏ္ဍများတွင် ပါဝင်ဆွေးနွေးမည်နည်း? on 1st August 2011, 9:09 pm
အ​ခု နောက်ဆုံး သတ်မှတ်လိုက်တဲ့ Category & Forum စာရင်းပါခင်ဗျာ။ ကျန်တာရှိရင် ထပ်ထည့်ချင်တာရှိရင် အကြံပြုပေးကြပါခင်ဗျာ။
Forum နှင့်သက်ဆိုင်သော ထုတ်ပြန်ချက်များ၊ မေးခွန်းများ၊ ဆွေးနွေးချက်များကို ဤနေရာတွင် ​ဆွေးနွေးနိုင်ပါသည်။
(Free) Ebooks, Software များ၊ ကောင်းနိုးရာရာ website link များ စသည်တို့ကို ဤနေရာမှတဆင့် မျှဝေနိုင်ပါသည်။
ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ သတင်းမျိုးစုံကို ဤနေရာမှတဆင့် မျှဝေနိုင်ပါသည်။
-Introduction & Birthday Wishes
Forum Member များတစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ဤနေရာမှတဆင့် ရင်းရင်းနှီးနှီး နှုတ်ဆက်ခြင်း၊ မွေးနေ့ဆုတောင်းပေးခြင်းတို့ ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
Unknown (ဒီ ၄ ခုကရောနေတော့၊ သူတို့ရဲ့ Category တွေကို ဘယ်လိုပေးရမလဲမသိဘူးဖြစ်နေတယ်။ နည်းနည်းပြောပြကြပါဦး။)
-Questions & Answers (for User)
Browser Crash ဖြစ်နေခြင်းမျိုး၊ Proxy လိုအပ်ခြင်းမျိုး၊ virus ကိုက်နေခြင်းမျိုး၊ အစရှိသော ပြဿနာများကို ​ဤနေရာတွင် မေးမြန်း၊ဆွေးနွေးနိုင်ပါသည်။
ဆောင်းပါးများကို ဤနေရာတွင် ရေးသားနိုင်ပါသည်။
(ဒီကောင့်အတွက် Description ကိုဘယ်လို ရေးရမှန်းမသိလို့ဗျ။ အကြံဉာဏ်လေးတွေ လုပ်ကြပါဦး။)
Design နှင့်သက်ဆိုင်သော ဆွေးနွေးချက်များ၊ သင်ခန်းစာများကို ဤနေရာမှတဆင့် မျှ​ဝေနိုင်ပါသည်။
Programming အခြေခံ သဘောတရားများနှင့် အခြားသော Programming
Java Programming နှင့်ပတ်သက်သော အကြောင်းအရာများကို ဤနေရာ​တွင် ဆွေးနွေးနိုင်ပါသည်။
VB.NET, C#.NET အစရှိသော MS Platform မှ Language များကို ဤနေရာတွင် ဆွေးနွေးနိုင်ပါသည်။
Android နှင့်ပတ်သက်သော အကြောင်းအရာများကို ဤနေရာတွင် ဆွေးနွေးနိုင်ပါသည်။
Web Design & Development နှင့်ပတ်သက်သော အကြောင်းအရာများကို ဤနေရာတွင် မေးမြန်း၊ဆွေးနွေးနိုင်ပါသည်။
HTML & CSS နှင့်ပတ်သက်သော အကြောင်းအရာများကို ဤနေရာတွင် ဆွေးနွေးနိုင်ပါသည်။
PHP နှင့် MySQL နှင့်ပတ်သက်သော အကြောင်းအရာများကို ဤနေရာတွင် ဆွေးနွေးနိုင်ပါသည်။
Unknown (ဒီ ၄ ခုလည်း တူတူဘဲ၊ ရောနေတော့ သူတို့ရဲ့ Category တွေကို ဘယ်လိုပေးရမလဲမသိဘူးဖြစ်နေတယ်။ နည်းနည်းပြောပြကြပါဦး။)
-Hacking | Cracking
Web Security, Software Security နှင့်ပတ်သက်သော အကြောင်းအရာများကို ဤနေရာတွင် ဆွေးနွေးနိုင်ပါသည်။ (For Education Purpose Only)
-Hardware & Networking
Hardware နှင့် Network နှင့်ပတ်သက်သော အကြောင်းအရာများကို ဤနေရာတွင် ဆွေးနွေးနိုင်ပါသည်။
Windows နှင့်ပတ်သက်သော အကြောင်းအရာများကို ဤနေရာတွင် ဆွေးနွေးနိုင်ပါသည်။
Linux နှင့်ပတ်သက်သော အကြောင်းအရာများကို ဤနေရာတွင် ဆွေးနွေးနိုင်ပါသည်။
16 Re: Forum အသစ်တွင် မည်သို့သော ကဏ္ဍများတွင် ပါဝင်ဆွေးနွေးမည်နည်း? on 1st August 2011, 10:36 pm
အဓိကအားဖြင့် ၄င်းအပိုင်းတွင် ကျနော်နိုင်သလောက် အားဖြည့်ရေးပေးပါမယ်
ကျန်တဲ့အပိုင်းတွေမှာလည်း ကျနေ်ာသိတာများရှိခဲ့ရင်လည်း ၀င်ရောက်ရေးသားပေးပါမယ်
17 Re: Forum အသစ်တွင် မည်သို့သော ကဏ္ဍများတွင် ပါဝင်ဆွေးနွေးမည်နည်း? on 1st August 2011, 10:52 pm
ET wrote: News Region
ကို ET ရေ၊ အဲဒါတှကေ အရငျက ဆှေးနှေးထားတာတှပေါ။
အခု ကြှနျတျောနောကျဆုံး Reply ပွနျခဲ့တာက Final ပါဗြ။
Last edited by sHa92 on 1st August 2011, 11:49 pm; edited 1 time in total
18 Re: Forum အသစ်တွင် မည်သို့သော ကဏ္ဍများတွင် ပါဝင်ဆွေးနွေးမည်နည်း? on 1st August 2011, 11:39 pm
ဟုတျကဲ့ပါ Founder ရေ
19 Re: Forum အသစ်တွင် မည်သို့သော ကဏ္ဍများတွင် ပါဝင်ဆွေးနွေးမည်နည်း?